Ezona ntengiso zintle zeDFlow ngoLwesihlanu oMnyama | Iindaba zeGajethi
UIgnacio Sala | | Izithethi, Umfanekiso kunye nesandi
Namhlanje lusuku uninzi lwenu ebelulindele lindela ukuthenga iKrisimesi, kwaye nangona iAmazon yenye yezona venkile zikwi-intanethi ukuthenga phantse naluphi na uhlobo lwemveliso, ayisoloko inezinto esizifunayo okanye ayisoloko ihambelana nohlahlo-lwabiwo mali lokuba sifuna ukuchitha.
Ukuba enye yeenjongo zakho zeli Lwesihlanu limnyama inxulumene nesandi, abafana be-dFlow babeka kuthi uluhlu olubanzi lwezinto zesandi ngohlobo lwezithethi okanye ii-headphone onokonwabela umculo owuthandayo naphina apho uya khona. Apha siyakubonisa olona dFlow lubalaseleyo lwangoLwesihlanu oMnyama.
I-dFlow isinika i-dFlow One Bluetooth Headphones ngombala omnyama nomhlophe ngee-euro ezingama-29,90 kuphela, xa ixabiso lazo li-euro ezingama-49. I-DFlow One headphones isinika ukugqiba kwi yesikhumba zokwenziwa kunye aluminiyam ukuba thina ukubonelela ngemvakalelo yokuthuthuzela okuphezulu. Babandakanya ezinye 40mm abaqhubi. Enkosi kubo kwaye Itekhnoloji ye-Deep-Bass
Ikwasinika isithethi se-dFlow Soul Bluetooth ngee-29,90 ze-euro, amaxabiso aso aqhelekileyo angama-euro angama-49. Inkqubo ye- dFlow Umphefumlo inika uyilo lwesakhiwo esibonelela nge- 360º isandi. Ukongeza, abaqhubi bayo bobabini bayongeza 10 W amandla erms, uneteknoloji I-NFC kunye neBluetooth 4.1. ikwasinika i Iphaneli yokuchukumisa onokumisa ngayo ingoma okanye uye kwelandelayo.
Ukongeza, ukuba siyayithanda imidlalo, kwaye siyaphuma kunye ne-smartphone yethu ukuba sibaleke, abafana abavela kwi-dFlow babeka kuthi Isongo sezemidlalo nge-9,90 ye-euro kuphela, nge I-50% isaphulelo kwixabiso eliqhelekileyo.
Ukuba ufuna Thatha ithuba lokubonelelwa yi-dFlow ubeka into esinayo ngoLwesihlanu oMnyama ke kuya kufuneka ume nge ukulandela ikhonkco.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umfanekiso kunye nesandi » Eyona dFlow ijongene neLwesihlanu omnyama